Fandrobana teny Mahavoky Avaratra - Naratra ilay mpamily bajajy voatifitra, voaroba ny vola an-tapitrisany
Handeha hanatitra ny vola maty any amin’ny mpampiasa azy eny Mahavoky ireto vehivavy roa mpiasan'ny Farmasia Belvédère sy Samby Tsara no efa nisy jiolahy niambina manoloana ny vavahady, ny alakamisy hariva teo. Jiolahy iray no nanambana basy azy roa vavy tao anaty bajajyy ka lasa ny tamin'izany ny paoketra nisy ny volà sy finday.
Taitra ilay mpamily bajajy ka nandeha nihodina handositra kinanjo nisy jiolahy roa hafa samy mitondra basy poleta indray nanakana azy. Nidina handositra izy ka notifirin'izy ireo ary voa teo amin’ny feny. Na niantso vonjy aza ireo vehivavy roa dia lasan'ireo jiolahy ihany koa ny paoketrany nisy ny vola sy ny finday ary ny fanalahidin’ilay toeram-pivarotam-panafody. Vola 720 000 Ariary no lasan'ireo jiolahy tany amin'ilay ramatoa miasa amin’ny Farmasia Samby Tsara. 2 000 000 Ariary kosa ny tany amin'ilay mpiasan'ny Farmasia Belvédère. Tokony tamin’ny 7 ora latsaka teo no nisehoan'ny fanafihana. Nanaitra ny manodidina ny fipoapoakan’ny basy sy ny antso vonjin'ireo lasibatra. Folo minitra taorian'izay dia tonga ny « Unité d'intervention rapide » na Police Secours, nisava ny manodidina saingy efa nadio ny rano nitan'ireo jiolahy.Tonga nanatevin-daharana azy ireo teny koa ny Zandary nefa samy niala maina. Manodidina ny tamin’ny 10 ora teo ho eo dia mbola nandray antso ny UIR fa mbola mihaodihaody eny Mahavoky Avaratra ireo jiolahy telo lahy mitondra poleta ireo ka nampitandrina ny vahoaka tamin’ny alalan’ny tambajotra sosialy. Tsy mandry fahalemana ny tany, mirongatra indray ny fanafihana mitam-basy ka tokony samy mailo. Izay mahita zavatra hafahafa sy tsy mahazatra eny amin’ny fiaraha-monina eny dia asaina hanatona ny tompon’andraikitry ny filaminana na eny amin’ny Polisy foibe izay nafindra vonjimaika eny amin’ny Mozea Akiba taloha na eny amin’ny Oolisy Mangarivotra, na ihany koa ireo Kaomisaria hafa manakaiky azy.